Sheekh Ibraahim Guureeye “Madaxweynaha Waxa uu Gobalada Dhexe u Wadaa In Cabdikariin Loo Dhiibo” +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Sheekh Ibraahim Guureeye “Madaxweynaha Waxa uu Gobalada Dhexe u Wadaa In Cabdikariin Loo Dhiibo” +Cod
Sheekh Ibraahim Guureeye oo ah gudoomiyaha Seddaxda gole ee Ahlu-sunna Waljameeca ayaa sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya aysan go’aan mid ah ka qaadan halka lagu qabanayo shirka maamul u sameynta gobalada Mudug iyo Gal-gaduud, isaga oo dhanka kale eedeeyay madaxweyne Xasan Sheekh.
Waxa uu tilmaamay in madaxweynaha uu shaqsi gaar ah u wato in uu noqdo madaxweynaha gobalada dhexe, islamarkaana aysan taasi aqbali doonin waa sida uu hadalka u dhigaye.
“Xukuumadda xubno ka mid ah inay ka keento madaxtooyo oo ay ka keento gobalada dhexe wax shaqeynaya ma ahan, waxaa hadalkaan iga soo yeeriyay madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu wataa Cabdikariin, Cabdikariinna gobalada dhexe Madaxweyne kama noqonaya” ayuu yiri Guureeye.
“Madaxweyne Xasan Sheekh kuma qancin doono shacabka gobalada dhexe Cabdikariin baan madaxweyne idiin kaga dhigayaa, kama gadmi doonto, kumana shaqeyn doonto, waxay kordhin doontaa dhibaato iyo in sida uu dowladda dhexe uga shaqeyn waayo uu tanna uga shaqeyn waayo” ayuu hadalkiisa ku dara Sheekh Ibraahim Guureeye.
Hadalkaan ayaa imaanaya xilli la filayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in safar uu ku tago degmada Dhuusa Mareeb ee gobalka Gal-gaduud, halkaasi oo uu ka soconayo shir dib u heshiisiin ah.